Dunida: Sodankii saac ba qof ayaa noqda bilyanneer | Radio Himilo
Home / Dhaqaale / Dunida: Sodankii saac ba qof ayaa noqda bilyanneer
Posted by: Sadia Nour June 5, 2022
Himilo – Markii ay kordheen qiimaha cuntada iyo shidaalka sabab la xiriirta colaadda Yukreyn iyo aafada Karoona, waxaa shaxda hantiilayaasha maalkoodu gaaray bilyanka ku biiray dad cusub, halka malaayiin kale na ay galeen xeendaabka saboolnimada darran, sida ku dhigan sahan ay sameysay hay’adda Oxfam.
Sahanka oo cinwaan looga dhigay “Ka faa’iideysiga xanuunka,” ayaa lagu sheegay in 573 ruux ay noqdeen bilyanneero kaddib sanadkii 2019-kii, dadkan dhantiilayaasha leh shirkadaha ka beec-mushtara cuntada, tamarta iyo dawooyinka.
Waxaa hantidooda ku kordhay $453 bilyan labadii sano ee u danbeysay, taasi oo ka dhigan in labadii cisha ba ay faa’iidayeen qiyaastii hal bilyan oo doolar. Cilmibaarista Oxfam ayaa lagu xusay in shirkadaha BP, Shell, TotalEnergies, Exxon, iyo Chevron- oo ah kuwa ugu waa wayn xagga ka ganacsiga tamar-, ay daqiiqaddiiba sameeynayeen faa’iido gaareysa $2,600.
Kaliya Cargill, oo ah shirkad ka beec-mushtarta dalagyada kasoo go’a beeraha Mareynkan-na laga leeyahay, sanadkii tagay waxa ay sameysay faa’iidada ugu badneyd tan iyo markii la aas-aasay 1865-kii (oo gaareysa $5 bilyan), waxey filaysaa hanti intaasi la’eg inay sameyso sanadkan 2022-ka.
Hadda, qoyska maamula Cargill waxey leeyihiin 12 ruux oo bilyanneero ah, halka kahor aafada karoona ay ahayd tiradu kaliya sideed. Waxey taasi ka dhigeysaa tirada bilyanneerada adduunka 2,668 oo qof, kuwaasi oo wadarta hantidoodu dhan tahay $12.7 trillion.
Sahanka hay’adda Oxfam, ayaa sidoo kale lagu sheegay in wixii ka danbeeyay billowgii karoonaha ay hantiilayaasha adduunka faa’iideen ku dhawaad $3.78 trillion. Shirkadaha dawooyinka sida Moderna iyo Pfizer ayaa iyana sameeyay hanti ballaaran, keliya tallaalka Covid-19 waxay daqiiq weliba ka sameeyaan faa’iido dhan $1,000.
Inkasta oo shirkadahaan lagu taageeray malaayiin doolar si ay u sameeyaan tallaalka karoona, hadda waa ay kasii hodmeen iyada oo dadka ku nool wadamada dhaqoolahoodu hooseeyo ee dunida 87% aysan helin tallaal dhammeys ah.
Marka laga yimaado kuwa cusub, waxaa jira bilyanneero sii hodmay oo faa’iiday 24-kii billood ee ugu horreeyay karoonaha lacag ka badan intii ay hantiyeen 23 sano.
Nasiib darrada jirta ee barbar socota sheekadan ayaa ah, in ay sii kordhayaan tirada dadka ku biiraya shaxda saboolnimada, sida ay saadaalineyso Oxfam 263 ayaa sannadkan la filayaa inay wajahayaan xaalad saboolnimo oo darran. Halbeeggan waxa uu ka dhigan yahay in 33-kii saac hal milyan oo qof ay noqdaan sabool.
“Hantida u korortay bilyanneerada caalamka kama dhigna inay yihiin kuwa si adag u shaqeeyay oo caqli badan, balse shaqaalaha ayaa ahaa kuwa shaqeeyay iyaga oo helaya mushaar yar, xaaladda ay ku shaqeynayaan na ay adag tahay.” Ayuu yiri Gabriela Bucher madaxa fulinta Oxfam oo khudbad uu ka jeedinayay shirka dhaqaalaha adduunka ee lagu qabtay Devos.
Shaqaalaha ka howlgala Shirkadaha cuntada, tamarta iyo dawooyinka ee sii hodmaya, waa inay shaqeeyaan 112 sano si ay u helaan lacagta uu sanad gudahii ku sameeyo mid ka mid ah bilyaneerada adduunka. Culeysyadaasi waxey sababeen in 4 million oo ka mid ah shaqaalada ku nool dalalka dhaca Latin America iyo Caribbean ay isaga tagaan shaqada.
Previous: Marina Granovskaia oo 12 sano kaddib ka tagtay Chelsea
Next: Jose Mourinho oo ku biiraya PSG